Iminyaka eli-101 yeKirk Douglas. Iincwadi zakhe kunye nabalinganiswa boncwadi | Uncwadi lwangoku
Ndidibene izolo 101 iminyaka (Disemba 9, 1916), ekuthiwa kungekudala. Kirk Douglas, okanye u-Issur Danielovitch Demsky, ebekho kwihlabathi ngaphezulu kwenkulungwane kwaye kubonakala ngathi uzimisele ukuqhubeka kancinci. Kunyaka ophelileyo ndambhalela Oku kubhaliwe kwaye namhlanje ndifuna ukwenza enye yokubuyela kuyo gxininisa inkalo yakho njengombhali. Kwakhona badlale abalinganiswa abaziwayo zoncwadi Kwaye, njengabo, eli bali lomdlalo bhanyabhanya alinakufa nangona kunjalo. Masiye kwi-102, uMnu. Douglas. Okanye nokuba ngubani na.
Masikhumbule ukuba icandelo lombhali likaKirk Douglas laqala xa kungena 1988. Wayeneminyaka engama-72 ubudala kwaye wapapasha iimemo zakhe zokuqala phantsi kwesihloko esithi Unyana we-rag Isalathiso kurhwebo lukayise. Kodwa ichaphazele nohlobo lwenoveli kunye noncwadi lwabantwana.
1 Abalinganiswa boncwadi
1.1 Umhlaba weNed
2 Iincwadi njengombhali
Akunakwenzeka ukuba kukho abahamba ngee-movie abangabonanga Iilwimi ezingama-20 000 phantsi koLwandle o I-Spartacus. Ewe kunokwenzeka ukuba kukho abafundi abazibonileyo ezi klikhi zefilimu kodwa bangazifundanga iincwadi. Ewe ungazenza zombini nakwiimovie uDouglas wayedlala kakuhle bobabini abalinganiswa.
Iilwimi ezingama-20 000 phantsi koLwandle Yiyo Kufuneka ube ne-adventure yenoveli maxesha onke. Mhlawumbi enye yezona zaziwa kakhulu, nangona phantse zonke zingumbhali omkhulu waseFrance owayenguye Jules Verne. Ngowe-1954 umlawuli URichard Fleischer wamsa kwimiboniso bhanyabhanya kwimveliso ye- Walt Disney. Kwaba yiklasi efanayo yohlobo lwe-adventure kodwa kwiscreen esikhulu.
Incwadi ibaliswa ngumntu wokuqala nguprofesa waseFrance UPierre aronnax, isazi sebhayoloji esidumileyo, esikwiqela lakhe Umncedisi weConseil kwaye ngenxa yakhe Ihabhulaji yaseCanada yeNed Land, bathathwa njengamabanjwa nguye umphathi wemoto, inkwili yakhe INautilus Uphazanyiswa ngumntu wonke sisilo saselwandle. Uhambo lwabo phantsi kweelwandle, iimfazwe zabo nezidalwa ezintle kunye neempikiswano phakathi kwabalinganiswa ukuzama ukubaleka okanye ukuqonda ukuziphindezela nokuzama ukuzibulala kukaNemo odidekileyo wenza ingxelo engaqhelekanga kumaphepha kunye nakwizakhelo zefilimu.
UDouglas ubonakalise ngokugqibeleleyo iNed Land ethandekayo, eqhayisayo kunye nesibindi kwisimilo esingalibalekiyo ngenxa yomzimba wakhe kunye notsisima. Mhlawumbi lolunye lweendlela zakhe zokutolika ezikude ngeendima zakhe ezinzulu njengobunzima, ukungacaci, ubuqhetseba okanye iintlobo zobuqhawe awazilima kakhulu.
Kusenokwenzeka eyona nto ayikhumbulayo neyenzileyo, nangona zazimbalwa. Umbhali waseMelika Howard ngokukhawuleza (owabhala phantsi kwegama elingu EV Cunningham) Ndandinethemba ukuqala kwakhe ukubhala I-Spartacus. Ukudibana ne Iqela lamaKomanisi, wayebizwe ngosaziwayo IKomiti yezeMicimbi yaseMelika kwaye bamvalela iinyanga ezintathu ngenxa yokudelela iCongress.
Ibali malunga nemvukelo yamakhoboka aseRoma akhokelwa nguSpartacus yamkelwa ngabapapashi abohlukeneyo, ongazange alinge ukupapasha ibali elinje. Ngokukhawuleza uthathe isigqibo sokuyipapasha eyedwa Ngendlu yakhe yokupapasha iBlue Heron Press kunye nokumothusa kwakhe, iikopi zomsebenzi ezingaphezulu kwamawaka angamashumi amane zathengiswa ngoqweqwe oluqinileyo. Emva kokuphela kwexesha leSenethi McCarthy izigidi zathengiswa kwaye yaguqulelwa kuyo Iilwimi ezingama-56.
Kwiminyaka elishumi emva kokupapashwa kwayo UDouglas uqinisekisile i-Universal ukudubula imovie esekwe kwincwadi kwaye inyanzelise ukubandakanya iikhredithi ukuya UDalton trumbo, ikwangumbhali onamagama amnyama owayekhe wavela kwinoveli. Umboniso bhanyabhanya wamalathisa UStanley Kubrick Kwakuyimpumelelo yeofisi yebhokisi eyaphumelela ii-Oscars ezine kwaye yonyulwa ezimbini ngaphezulu. Kwaye bonke ubuso nobuntu bukaSpartacus buya kuhlala bunjalo ngeKirk Douglas.
Ukubhala incwadi lulwandiso lokuba ngumdlali weqonga. Ukwenza imovie udinga iqela liphela; xa ubhala, ungumlawuli kunye nabo bonke abalinganiswa.
Emva kwembali yakhe yokuqala, uDouglas wakhuthazwa ukuba aqhubeke nokubhala. Ke, kwi 1990, esidlangalaleni Danisa nomtyholi, enye ibali eliyintsomi apho umlinganiswa ophambili eyi Ukuthinjwa kwamaYuda ohambela e-United States, apho aya kuba ngumlawuli wefilimu kwaye aqalise ikhondo lomsebenzi elimiselwe ngamabhongo. Impikiswano wayeyazi ngokuqinisekileyo. Y I-tango yokugqibela eBrooklyn ipapashiwe Ngo-1994, malunga nebali lothando lwesibini esidibana kwiseshoni ye-movie apho iprojekthi I-tango yokugqibela eParis.
En 1992 wahlupheka a ukwaphuka kwendiza okunzima lonto iphantse yamlahlekisela ngobomi bakhe kwaye amava amkhuthaza Isipho. Wayekwangumvelisi wencwadi yakhe yesibini, Ukunyukela entabeni, eyamzuzela ibhaso loncwadi lwe-Deauville ngoSeptemba ka-1999. Uye wabhala neencwadi zabantwana ezimbalwa, kubandakanya nale inelungelo AmaGorha aselula eBhayibhile. Kwaye ngo-2008 wabhala enye incwadi enomxholo Masijongane nayo: iminyaka engama-90 yokuphila, ukuthanda nokufunda. Okokugqibela? Sobona…
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iminyaka eli-101 yeKirk Douglas. Iincwadi zakhe kunye nabalinganiswa boncwadi
Iincwadi ezisi-7 zokusetyenziswa kolwimi. Iinqwenela, ukufunda, ukuphonononga ...